On jan 8, 2020 6 112
Nitsidika ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy, teny Andohalo, omaly, ny praiministra Ntsay Christian. Nisy ny fifanakalon-kevitra nataony tamin’ny tomponandraikitra voalohany sy ireo manamboninahitra teny an-toerana. Niompana tamin’ny fanatsarana ny fomba fiasa ny dinika tamin’izany, izay nandraisan’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard, anjara ihany koa.
Nambaran’ny lehiben’ny governementa fa: » Manana adidy lehibe amin’ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ary miara-misalahy amin’ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena sy ny Polisim-pirenena amin’ny fifehezana izany mba hahatongavana amina rafitra takian’ny toetr’andro, ankehitriny.« , hoy izy.
Nomarihin’ny Praiminisitra fa mitohy ezaky ny fitondram-panjakana amin’ny famerenana sy ny fametrahana filaminana sy fandriampahalemana any amin’ny faritra rehetra. » Efa manomboka ahitam-bokatra izany amin’ireo toerana izay voasokajy ho faritra mena, ankehitriny. Noho izany, ataontsika ho laharam-pahamehana ny hetsika mifandraika amin’izany. Ary raha nahazatra fa ny zandarimariam-pirenena sy ny polisim-pirenena no mpisehatra mivantana hatrizay novana ny fomba fijery ka ho mpisehatra feno ny Tafika Malagasy », hoy izy namarana ny resaka tamin’ny mpanao gazety.
Marihina fa mbola hitohy ny fampitaovana ny Tafika Malagasy, amin’ity taona 2020 ity raha ny fanambaran’ny praiministra.
MADAGASCAR: UNE USINE DE PRODUCTION DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR